युएईको एक कम्पनीले माग्यो ३५० नेपाली पुरुष महिला कामदार, मासिक तलब कति ? - Khabar Center
युएईको एक कम्पनीले माग्यो ३५० नेपाली पुरुष महिला कामदार, मासिक तलब कति ?
काठमाडौं । युएईको एक कम्पनीले भारी संख्यामा नेपाली कामदारको माग गरेको छ । युएईको एक सहरमा रहेको saned facility mangemant llc कम्पनीले विभिन्न पदका लागि २५० जना पुरुष र १०० जना महिला गरी जम्मा ३५० जना नेपाली पुरुष महिला कामदारको माग गरेको हो ।
कामदारले तलब खान बस्न सहित ३५ हजार माथिदेखि ५१ हजार माथि सम्म पाउनेछन् । इच्छुक कामदारले अल जराफ ह्युमन रिसोर्स कन्सल्टेन्ट प्रा. लि.को कार्यालय सिनामंगल काठमाडौंमा मंसिर १३ र १४ गते अन्तरवार्ता दिनु पर्ने छ ।
स्वदेशमा हुने जीवन बिमा, स्वदेशमा हुने मेडिकलको खर्च, भिसा स्ट्याम्पीङ शुल्क कामदार आफैले बेहोर्नु पर्ने छ । विदेशमा हुने बिमा शुल्क, विदेशमा गरिने मेडिकल खर्च, हवाई टिकट र भिसा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने छ ।
प्रकाशित मिति :मंसिर ६ २०७८ सोमवार - १२:५६:५० बजे
आकर्षक तलब र खान बस्नसहित कतारमा नेपाली कामदारको माग, कामदारको संख्या कति ?
कोरियन भाषा परीक्षा पुस १ देखि, अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने (सूचनासहित)
कोरिया पुनः प्रवेशका लागि आवेदन आह्वान
नेपाली श्रमिकको लागि बहराइनले आवागमन खुला, खोप लगाएका क्वरेण्टीनमा बस्न नपर्ने
एक महिनाभित्रै छनोटमा परेका कामदारलाई इजरायल पठाईने